वैदेशिक रोजगारमा जाने म्यादी बीमाका लागि नयाँ व्यवस्था, ‘विदेश जानेलाई झर्कोफर्को हुँदैन’ – Taza Post
वैदेशिक रोजगारमा जाने म्यादी बीमाका लागि नयाँ व्यवस्था, ‘विदेश जानेलाई झर्कोफर्को हुँदैन’
वैदेशिक रोजगारी बीमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न बीमा समितिले सामूहिक पुल(एकद्धार)मार्फत बीमा पोलिसी जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि हुने म्यादी बीमामा कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। अब एकै ठाउँबाट बीमा पोलिसी बिक्री हुने र कम्पनीको व्यापार हिस्सा अनुसार आम्दानी बाँडफाँड हुनेछ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय अघि कुनै कम्पनीको नाम नराखि बीमा पोलिसी बिक्री हुनेछ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय अघि कम्पनी/कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धाले कामका लागि विदेश जानेहरु तान्ने होडबाजी हुने गर्थ्यो।
मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो नयाँ व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिनेछ। सामूहिक पुल कार्यान्वयन आएपनि कार्यविधी तयार नहुन्जेलका लागि कम्पनीले आफै पोलिसी बिक्री गर्नेछन् भने पुल व्यवस्थापनको जिम्मा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिइएको छ।
समितिले कार्यविधि तयार पारि पुल तयार पार्न १५ दिनको लागि समयावधि दिएको छ। १५ भित्रमा कार्यविधि बनाई सामूहिक पुल तयार पार्ने सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डले जानकारी दिए। उनले भने ‘पुलको कार्यविधि सँगै आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर निर्माण भए पछि मात्रै काम गर्न सजिलो हुनेछ।’
पुल व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कार्यालय आवश्यक पर्छ। त्यही कार्यालयले वैदेशिक रोजगार बीमा पोलिसी बिक्री गर्नेछ। पोलिसी बिक्री गर्नेदेखि दावी भूक्तानीसम्मका काम त्यही पुलमार्फत हुनेछ। जारी भएका पोलिसीलाई पुलले बजारमा कम्पनीको हिस्सा अनुसार भाग लगाएर दाबी भूक्तानी तथा प्रिमियम बापतको रकम दिनेछ। पुलको कार्यालय खर्च तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको खर्च कम्पनीले गर्नुपर्नेछ।
पुलमार्फत कार्यालयको ठाउँ र संख्या निर्धारण कार्यविधिमै समेटिने पाण्डेले जानकारी दिए। पुलको कार्यालय स्थापना भएसँगै अहिले वैदेशिक रोजगार कार्यालय अगाडि खोलिएका कम्पनीहरुले आफु खुसी वैदेशिक रोजगार बीमा पोलिसी बिक्री गर्न पाउने छैनन्। यसका लागि वैदेशिक रोजगार कार्यालयसँग समन्वय गरि पुलले नै पोलिसी जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने बीमा समितिका निमित्त कार्यकारी अधिकृत राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए।
उनले भने ‘यस क्षेत्रमा देखिएका विकृती अन्त्यका लागि छुट्टै पुल तयार पारिएको हो। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका छौ’।(source)
Previous सरकारी कर्मचारीले पेन्सन पाउन अब आफूले पनि रकम जम्मा गर्नुपर्नेः कति काटिन्छ? कसरी पाइन्छ?
Next टुटल’ र ‘पठाओ’मा प्रमको चासो, यातायातमन्त्रीलाई निर्देशन- ‘तुरुन्त पहिले जस्तै चल्न दिनु’